Isiyaluyalu nokusebenzisa kabi izidakamizwa, usongo ofihliwe futhi osobala
Umlutha nokusetshenziswa kabi kwezidakamizwa, usongo lufihlekile futhi lubala, kungani izihloko eziningi nezihloko zilotshwe ngakho? Uma izinto ezinjalo zibi kakhulu, kungani zikhona futhi zibadinga? Kungani abantu basebenzisa izidakamizwa, kungani konke kuqala? Kungenzeka yini ukuba alulame kule sifo futhi imiphumela yani? Ukubhebhethekisa izidakamizwa nokusebenzisa kabi izidakamizwa bekulokhu kube yizihloko ezixoxwa kakhulu, enye yezinto ezesabekayo kakhulu, kusukela ekubukeni ukuthi lezi zifo azibhubhisi impilo kuphela yabantu, kodwa futhi ziyiziqu zayo, izici, ingqondo, ukuziphatha. ...
Ngakho-ke, ake sihlolisise lesi sihloko: "Ukulutha umlutha nokusebenzisa kabi izidakamizwa: izinsongo ezifihliwe futhi zicacile." Isongo sokuqala esicacile yilomlutha. Imithi enjalo ibangela kokubili umkhuba wokuphila wenyama kanye nesidingo sengqondo sokuzitholela. Ukunamathiselwe kwengqondo kubangelwa ukulutha komuthi. Izibonakaliso zalo ziyisidingo esidingekayo sokwandisa umthamo, ukuthembela ngokomzwelo kulo muthi, isidingo esinamandla somthamo olandelayo. Uma kungenjalo uhlobo oluthi "ukwephula", ngezinhlobo ezinamandla zezidakamizwa zibizwa kakhulu, "zibuthakathaka" zingahambisana nokucindezelwa, ukucasuka, ubuhlungu, isimo sengqondo esibi, izinguquko zobuntu. Ukuxhomeka komzwelo kubonisa ubuhlobo phakathi komuntu nomuthi wakhe, futhi kungabangela isimo sithintekayo ngemuva kokuba umthamo uthathwe.
Ukubhebhetheka kwezifo ezinjengokusetshenziswa kabi kwezidakamizwa nokulutha izidakamizwa kungaholela kwenye, imiphumela ebalulekile. Esinye isongo esicacile, esilandela kusukela kokuqala, ukungabi khona kwempahla, izindleko ezinkulu zemali, ukulahlekelwa phansi, izinkinga ezivela lapho umuntu ogulayo engenakho ukukhokha izidakamizwa. Ngezikhathi ezinjalo amaphupho onke aphukile, lowo muntu angafuna imali ezihlobo, asongele izihlobo, athengise izinto ezibiza kakhulu ukuze athenge enye umthamo. Lokhu akuvamile kakhulu nesifo esinjengokusetshenziswa kabi kwezidakamizwa, ngoba izidakamizwa ezivela kule ndawo zivame ukungabizi, kanti isifo sofuzo singasebenzisa amakhemikhali asekhaya, ngisho nezidakamizwa ezilungisiwe, ukwanelisa izidingo. Kodwa lokhu kuthatha enye ingozi ebalulekile. I-toxicoma ingase ibonakale ngokubonakala kwayo, ngoba izixazululo ezinjalo ziyithonya ngokucacile - ngaphandle kokubukeka kabi kwezidakamizwa ezithile, umuntu angakwazi ukubona ukusheshiswa komlingiswa emlonyeni.
Ngaphezu kwalokho, kokubili ukusebenzisa kabi izidakamizwa nokulutha izidakamizwa, nokuba nomlingiswa ohlukile, ngokulinganayo kuqukethe ukwesaba okucacile ukuthi emva kwezinyathelo zokuzijabulisa, ukwaneliseka ngokomzwelo nangokwengqondo, imiphumela ebuhlungu eyenzekayo-ikhanda, isisulu sokuhlukunyezwa, isizungu ... Isongo esifihliwe ukuthi ngaphezu Konke lokhu kumuntu osebenzisa izinto ezidakayo, ingqondo iyancipha, izinqubo zokucabanga zivinjelwe, noma yimiphi amakhono alahlekile, futhi umuntu ungaphansi komuntu njengalokhu kufanele abe-ohlakaniphile, othuthukile, othukuthele oval, ohlakaniphile.
Ngaphezu kwalokho, izifo ezinjalo zenza umonakalo omkhulu, ngokwemigomo yokuziphatha, kwengqondo yomuntu ngamunye, ubuntu benduli - futhi lokhu kuyingozi yokufihla. Izimpawu zokuqala zokusetshenziswa zibonakala ezinyangeni eyodwa kuya kwezinyanga ezimbili. Lokhu kungenandaba nokuphila, isithakazelo esilahlekile ekufundeni nasekusebenzeni, ukungabikho emsebenzini kuqala, inqubekela phambili embi, umuntu ulahlekelwa ngamakhono akhe. Khona-ke imiphumela yemvelo yesifo - ukwesaba, ukucasula, ukuxabana, ukungazinzi ngokomzwelo. Isimo sengqondo sesiguli ngokuvamile sishintsha kusukela ekujuleni okukhulu okubi futhi okubi, ngokuphambene nalokho, ephakeme, ejabulisayo, ejabule. Ezinyangeni eziyisithupha kamuva - ukungathandeki nokunganaki. Emva kwakho konke, umuntu uqala ukwakha isimiso sakhe samagugu azungeze isidakamizwa nokusetshenziswa kwayo, okungeke kulungiswe ngisho ngokwabo. Uyabona ukuthi ulahlekelwe yindlela yakhe, impilo ibe yinto engenasisekelo, izinyathelo ezidlule zishiya ukungabalulekile. Phela, isikhathi siphenduka i-monotone - ukuthatha umthamo futhi akukho lutho, konke okuzungezile kuyaba grey futhi akudingekile.
Ukucabanga okunjalo, nokunganaki kosuku olulodwa kungabangela ukuzibulala. Ngaphezu kwalokho, ukuzibulala okuncane, njengokusongela lowo muntu, kwenzeka ngesikhathi sonke sokusetshenziswa kwezidakamizwa. Umuntu uzibulala yena nomzimba wakhe, ithonya lezidakamizwa kuye, kuye ngokuthi hlobo luni - lukhulu. Umzimba wonke uhlupheka, okungaholela ekuguleni nasekufeni. Ngaphezu kwalokho, ukufa okuvame kakhulu ukudlula ngokweqile. Umphumela wokusebenzisa izidakamizwa isifiso esiqhubekayo sokwandisa umthamo. Owokuqala, "omncane" ukuyeka ukuletha phezulu, ngakho-ke inani labo liyanda njalo, elingase lifinyelele iphuzu eliphakeme lalo mzimba, okuwumphumela wokufa okungalindelekile, okuyinto engozini efihliwe kumuntu ngamunye. Ngokujwayelekile umthamo uyisici esiyingozi kakhulu futhi esingalawulwa.
Ngaphezu kwalokho, ukufa kungenzeki nje kokudlula ngokweqile, kodwa kwezinye izinhlobo zezidakamizwa kanye nokuntuleka kwesilinganiso. Ngokujwayelekile ubunzima bezezimali, ukungabi nethuba lokuthola izidakamizwa yizinto ezibangela le ngozi. Futhi hhayi ngisho nokugxila kwezinye izidakamizwa, umuntu angafa nje ngokuntuleka kokudla noma esinye isidingo esibalulekile esingase siphakamise endleleni yokuphila engalawulwayo kanye nokuntuleka kwemithombo yezinto ezibonakalayo.
Umonakalo kulesi sifo nawo wenziwa emndenini wesiguli, ngoba abahlupheki. Kubuhlungu njalo nokubuhlungu kwengqondo ukubuka izihlobo ezigulayo, ngaphezu kwalokho, lezi zinsuku zingakwazi ukulawulwa futhi zilimaze izihlobo zazo ngokuzenza zibe yisisulu sokuhlukunyezwa kwengqondo noma ngokomzimba.
Ukulutha kwezidakamizwa nokusetshenziswa kabi kwezidakamizwa kuthwala izinsongo ezisobala futhi ezisongelayo, okungabazeki ukuthi kuthinta futhi kuthinta impilo yomuntu ngamunye. Umuntu ulahlekelwa ukuziphatha, ingokomoya, ngokwakhe, ubuntu bakhe, amaphupho kanye nezinhlelo, ithemba, ukungasho lutho ngezempilo nokubukeka. Yena ngokwakhe uzibulala, ufanise ukuphila kwakhe ngotshani, abe umlutha wamakhemikhali futhi nsuku zonke ubeka ukuphila kwakhe engozini, kwenza ukuphila kwakhe nabathandekayo bakhe bangabheki.
Indlela yokwakha ubuhlobo nomama omdala?
Ungayisebenzisa kanjani usuku lokuzalwa kwengane?
Imidlalo yemidlalo yezingane zesikole
I-Baked inyama ngesiNgisi
I-pizza ephusiwe yokudla kwasekuseni
UBrad Pitt waduduzwa ezandleni zikaJolie owayeneminyaka engu-21 ubudala, isithombe sakhe
Indlela yokukhetha izingubo ezifanele kubantu abambalwa
Iresiphi ye-chocolate pie enezikhonkwane